Ulfaafi dhiphina sammuu: 'Waan natti dhaga'amu himnaan mucaakoo na jalaa fudhatu' - BBC News Afaan Oromoo
Ulfaafi dhiphina sammuu: 'Waan natti dhaga'amu himnaan mucaakoo na jalaa fudhatu'
Yeroo mucaashee kan lamaffaa garaatti baattu gaazexeessituu Annaa Ceesay gara malee of jibbitee dhiphina sammuu hamaa keessa galtee turte.
Haata'u malee, rakkoo ishee kana abbaa warraashee Babou Ceesay dabalatee nama tokkottuu hin himne ture.
Amma garuu maatiin biroo akka fayyaa sammuu miiseensa maatii isaanii eeganiif gargaarsa gochuuf murteeffachuu dubbatti.
Akkuma maatii ijoollee reefuu manaa qabanii tokkotti, guyyaa keessaa saatiin ofii ofiinn itti yaadatan muraasadha. Garuu yeroo tokko tokko qalbiin ofii waan tokko itti mullattee waan keessa jiran akka birrachuuttillee of arguun ni jiraata/
"Guyyaa tokko yeroon hirribaa ka'e baayyee tokko natti dhaga'ame," jettu dubartii umuriin ishee ganna 33 ta'e Anna Ceesay. Annan yeroo ammaa mucaashee lamaffaa ulfa ji'a ja'aadha. Ulfa lamaffaa kanaan osoo jirtuudha rakkoon of jibbii (depression)fi dhiphachuun hamaa kun kan ishee mudate.
"Yeroo sanatti ture, ganama barii, akkan dhibame qaamumakoottillee kan natti dhaga'ame.
"Yeroo tokko tokko ni bada, yeroo biraa ammoo deebiyee dhufa. Kanaaf, guyyoonni tokko tokko guyyoota kaanirra ni caalu," jetti.
Waan garaacha koo gadi liqumfamuu natti dhaga'amu sana waliin walqabatee dhiphuun isheetti name. Wantota duraan ishee yaaddessee hin beekneefillee gara malee yaadda'uutti kaate. Walumaa galatti garuu wanti baayyeen sirrii hin taane akka ta'aa jiruutti yaaduu eegalte.
Gadameessa dubartii duute keessaa daa'imni jalqabaa dhalatte
Kana biratti ammoo qophaa ishee maatii qabattee jirti sababiin abbaan warraa ishee hojiif bakka biraa deemeef.
"Nyaata bilcheessuullee dabalatee waan hundaa akka maleen dhiphachuu jalqabe," jetti Annan.
"Torban torbaniin foon lukkuu hojjedhee dhiyeessaa turullee gara boodaa guyyaa tokkon summii waliin makeen nama nyaachisa jedheen sodaadha ture. Hojii foon lukkuu qopheessuu yeroo kaan hojjedhu akka haaratti akkamiin hojjetama jedheen ;Google' irra barbaachuun jalqabe; waliin hojjedhu badaa hin beeku."
"Namootaaf nyaata summaa'e kenneefii namni tokko du'uu danda'a jedheen yaadan ture."
Annan rakkoo dhukkuma samuushee nama isheetti dhiyoo jiru mara ni dhoksite-abbaa warraashee, maatiifi firootashee dabalatee tokkottuu hin himanne. Isheen ofumasheellee akka rakko kana qabdu !sirriitti hin amanneyyu," jetti.
"Ani qophaakoon turellee jedhee hin yaadu garuu wanta sirrii hin taane tokko yeroo yaaddutti gara sammuukee duubaa kaawwachuun qofaa itti rakkachaa jireenya guyyaa guyyaakee itti fufuu filatta. Ani kanan godhe kana ture."
"Yoo ijoollee xixiqqoo kan qabdu ta'e jireenya ofii baayyee yaadachuun rakkisaadha. Of dagatanii isaanumaaf dursa kennanii jireenya akkuma barameen itti fufuudha. Waan kana yaaduudhaaf ji'a lama natti fudhate. Mliif akka ta'e beektuu? Kana qofaakootti hojjechuu hin danda'u waan ta'eef gargaarsa na barbaachisa ture. Yeroon gargaarsa argachuuf fedhus baayyee akka malee sodaachisaa ture."
Guyyaa tokko mucaa intalaashee mana barumsaa geessitee yeroo deebitu, Annan akkuma konkolaataashee keessa teessee jirtuttu gara dhaabbata rakkoo kana irratti gargaarsa kennan toora gargaarsa Pandas jedhamuutti bilbiluu eegalte.
Dhaabbanni Pandas jedhamu kun dubartotoa rakkaa dhukkuba sammuudhiphinaafi of jibbuu da'umsa duraafi booda mudaturratti deggersa ogummaa taasisu.
Gara dhaabbatichaatti bilbiluu yaaluun "akka nama hallayyaa ce'uutti nama sodaachisa," jetti.
Yeroo ammaa ulfa ji'a saddetii kan taate, Annan lakkoofsa bilbilaa sana torban guutuu barbaadaa turte. Guyyaa sana bilbiluudhaaf yaalii taasisuun ishee ammoo jabina wa'ii tokko gara ishee fide.
"Umuriikootti kanan waan tokko sagalee ol fuudhee dubbadhe yeroon gara toora gargaarsaa Pandas jedhamu sanatti bilbile ture. Bilbila osoo bilbilaa jiruu baayyee akkan boo'e nan yaadadha," jette.
"Kanan boo'eefis anaaf gargaarsa barbaaduun cimaahda sababiin isaas ani akka nama of danda'uuf namatti hirkadhee hin beekne tokkoottidhaadahdan ture. Anaaf gargaarsa barbaachuu jechuun wanta yaadamee hin beekne ture."
Dubartiin toora bilbilaarra jirtu hedduu na jajjabeessite. Dubartiin bilbilarraa jajjbeessaa jirtu kun ofiifillee da'umsaan booda rakkoo dhiphuufi of jibbuu akka qabdi ture Annatti himte. Kana yeroo itti himtus fayyuudhaaf abdiin akka jiru mirkaneessiteef. Kanumaan akka isheen doktora ishee bira deemtuuf jajjabeessite.
"Akkuman bilbila cufeen, gara abbaa manaakoottan bilbile. Kun yeroo jalqabaa ani isatti himedha. Yeroo sanattis inni Ameerikaa jira ture," jetti Annan.
"Innis waan fagoorra jiruuf hedduu tookko dhiphatee waan godhus wallaale. Wanti tokko narratti akka ta'aa jirutti garuu ana biraa dhibuutti jeeqame."
Goodayyaa suuraa Anna Ceesay mucaa ilmaashee waliin
Babou akka jedhetti ko'umni jireenyaa yerokkoon akkasii kun akka isaanirratti qancare taasiseera jedha.
"Hundumaa caalaa isheen nama jabduu rakkoof hin mo'amneef gargaarsa barbaaddee hin beeknedha. Anis kanaan ishee beeka , ishees dinqisifadha. Ar'a garuu ishee natti ta'uu didde. 'Ati waan hamaa si mudate tokko jala jirta' jedheen gaddi guddaan tokko natti dhaga'ame. Achumaan osoon hin turiin hanga danda'ametti karaan ittiin gara manaa deemuu danda'un yaaduu jalqabe," jedha.
Jireenya isaa keessatti wanta Annan jette callisee dhaggeefachuudhaaf isa jalqabaa akka ta'e ibsa.
"Ani mana keessan jira guyyaa hunda ishee waliin jiraachaa," jedhe. "Kanaaf, waan nama rifachiisu ture. Akkamiin hanga kana ga'e? Anilleen eenyummaakooyyuu dagadheera."
Annan beellama hakiima ishee bira deemuu qabattee
Osoo waan hunda hakiima isheetti hin himiin dura, guyyaa jalqabaa wanti tokko garaacha ishee keessaa kan luqimfamaa jiru akka itti dhaga'ameefi akka dhiphisuu jalqabe itti dubbatte. Gargaarsaaf namoota gaafachuunis miidhaa biraa qaba jettee akka yaadoftes itti himte.
"Yoon wanta natti dhaga'amu sitti hime mucaa inatalaakoo na jalaa fudhatta jedheen yaadan jedhe'" jetti Annan.
"Yeroo haati mucaa dhala qabdu tokko gara hakiimaa dhaqxee 'ani samuun koo fayyaa natti hin fakkaatu' jettu baayyee sodaachisaadha. Ani dubartoota hedduutti dubbadheera, isaanis akka natti himanitti hakiima bira deemuu hin barbaadan sababiin isaas dhiibbaa inni maatiifi ijoollee isaaniirratti qabaachuu malu yaadda'u."
Hakiimichi Annaa fuuflaa fula ilaaluun akka jedheen. Waan gaarii hojjette, namni mucaa intalaakee fudhatus hin jiru ittiin jehde.
Annan gara garee wallaansa gorsaafi jajjabeessuu NHS naannootti argamuutti ergamteen. Hanga beellama hakiimaa ishee jalqabaa deebitee deemtutti wallaansa gorsaafi jajjabeessuu jalqabaa argatteetti.
Fayyaa sammuu yeroo ulfaafi ulfa boodaa
Ogeessi fayyaa sammuu Prof Lorraine Sherr akka jetutti ulfi rakkoowwan dhukkubbii samuu akka uumamu ni taasisa, kan duraan jiru yoo ta'es hedduu ni hammeessa.
"Mallattoowwan rakkoo kanaa akka imimmaan namati baayyisuu, dadhabbii, hirribni jeeqamuufi yeroo tokko tokko garuu dhibee fayyaa mallattooni isaa qaama irrattis mullatu dabalachuu danda'a.
Furmaanni isaa inni jalqabaan jetti ogeettiin kun yeroo dhimmi fayyaa sammuu si mudatetti qofaa itti rakkachuun hin barbaachisu. Namoota naannoo keessan jiran akka ogeettii deesiftuu, ogeessota kunuunsa fayyaafi hakiimaakeetti himi. Yoo dhukkubbii qama mullatuurratti argites gargaarsa argachuuf gaafachuu sodaattee duuba hin deebiyiin jetti.
Kun dhukkubbii sammuufis ni hojjeta.
Annanis yeroo beellama hakiimashee marsaa lamaffaa deemtu ulfi ishee ji'a sagal guute.
Amma Annaan qophaashee miti. Dhibee sammuu ishee mudatettikan ishee gargaaran ogeessota fayyaa, abbaa warraa, maatii, firootaafi hiriyyoota argtteetti.
Kun ammoo dhiphina xiqqaayeroo ulfaafi ulfa boodaa mudatu salphaatti wallaansaan fayyaa danda'u hammatee gara maraatummaatti geessuu malurraa akka fayyitu gargaareera.
Kanaaf jetti Annan, ilaalchi qoollifannaan nama rakkoo sammuu qabuf taasifamuu sirrii miti jetti.
Kun akka namni dhibee ofiillee dhokfatu taasisa jetti.
Akkuma isheen rakkoo sammuun qaba jettee yeroo haakiimatti himattu mucaan ishee kan jalaa fudhatamu itti fakkaate, of beeksisuun dhiibbaa addaa qabaachuu mala jedhanii kan dhokfatan ni jiraatu.
Abbaan warraa ishee Babou ammoo waa'ee dhibee fayyaa ofii kana walitti himchuufi waliif beekuu caalaa wallaansi guddaan hin jiru. Inni isa bu'uuraafi barbaachisaadha jedha.
"Sirriittis wal baruufi walhubachuus kan caalu hin jiru."
Biiroo Fayyaa Oromiyaa: 'Rakkoo nageenyaatiin ummanni tajaajila fayyaa dhabuun rakkachaa jira'